धनुषामा मेयर र उपमेयरको समूहबीच झडप – www.janabato.com
२१ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:०६ August 6, 2019 Janabato Online
२१ साउन, जनकपुर । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद झडपमा परिणत भएको छ । नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डल र उपप्रमुख रेणु झाबीच बढेको विवाद कुटाकुटमा परिणत भएको हो । मण्डल र झाको समूहबीच मंगलबार झडप भएको छ।
← नेकपाका तीन नेता पक्राउ
रुपन्देहीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै →
प्रदेश नं. ५ मा मन्त्री परिषद् विस्तार हुँदै, बराल, गिरी र पौडेलले शपथ लिदै
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:५६ Janabato Online Comments Off on प्रदेश नं. ५ मा मन्त्री परिषद् विस्तार हुँदै, बराल, गिरी र पौडेलले शपथ लिदै
जनताको आवाज बन्द नगर्न जनसांस्कृतिक महासङ्घको कडा चेतावनी
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:२३ Janabato Online Comments Off on जनताको आवाज बन्द नगर्न जनसांस्कृतिक महासङ्घको कडा चेतावनी
‘महापतन’ : प्रचण्ड-बाबुराम विचलनको अन्तर्कथा
२ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०२:२४ Janabato Online Comments Off on ‘महापतन’ : प्रचण्ड-बाबुराम विचलनको अन्तर्कथा